အစ်မအကြီးဆုံးမြန်မာပြည်ရောက်ခိုက် ပျော်ရွှင်စွာတွေ့ရတဲ့ ညီမသုံးယောက်
မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်နှင်းဝတ်ရည်သောင်း
6 Apr 2018 . 9:58 AM
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ မှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် နှင်းဝတ်ရည်သောင်း ဟာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်နေပြီး မိသားစုတွေနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်ဖွယ် တင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို သရုပ်ဆောင်အေးဝတ်ရည်သောာင်း က သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ အခုလိုတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ် “Happy Back Day Ma Gyi ❤️❤️❤️
သရုပ်ဆောင်နှင်းဝတ်ရည်သောင်း ဟာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားပြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတာ ကြာပါပြီ။ အခုဆိုရင်တော့ အစ်မအကြီးဆုံး မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်နေတဲ့ အတွက် နှင်းဝတ်ရည်သောင်း ၊ အေးဝတ်ရည်သောင်း နဲ့ ဆွီဝတ်ရည်သောင်း ညီမသုံးယောက်လုံးကို ပျော်ရွှင်စွာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ညီမအငယ်ဆုံးလေး ဆွီဝတ်ရည်သောင်း ကတော့ အစ်မနှစ်ယောက်လိုသရုပ်ဆောင်ခြင်းထက် သီချင်းတွေသီဆိုရတာကို ပိုခုန်တတ်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်နေတဲ့ သူတို့မိသားစုလေးကို ကြည့်ရင်းပရိသတ်ကြီးလည်း အပျော်တွေကူးစက်ပါစေလို့…….
ဝမ်းသာလုံးတွေဆို့နေတဲ့ မမကြီးနှင့် ညီမလေး နှစ်ယောက်
Photo Credit: Aye Thaung facebook
မွနျမာပွညျကို ပွနျရောကျနတေဲ့ သရုပျဆောငျနှငျးဝတျရညျသောငျး
အင်ျဂလနျနိုငျငံ မှာသှားရောကျအလုပျလုပျကိုငျနတေဲ့ သရုပျဆောငျ နှငျးဝတျရညျသောငျး ဟာ မွနျမာပွညျကို ပွနျရောကျနပွေီး မိသားစုတှနေဲ့ အတူ ပြျောရှငျဖှယျ တငျထားတဲ့ ဓါတျပုံတှကေို သရုပျဆောငျအေးဝတျရညျသောာငျး က သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျမှာ အခုလိုတငျထားတာတှရေ့ပါတယျ “Happy Back Day Ma Gyi ❤️❤️❤️
သရုပျဆောငျနှငျးဝတျရညျသောငျး ဟာ အနုပညာအလုပျတှကေို ရပျနားပွီးအင်ျဂလနျနိုငျငံမှာ သှားရောကျအလုပျလုပျကိုငျနတော ကွာပါပွီ။ အခုဆိုရငျတော့ အဈမအကွီးဆုံး မွနျမာပွညျကို ပွနျရောကျနတေဲ့ အတှကျ နှငျးဝတျရညျသောငျး ၊ အေးဝတျရညျသောငျး နဲ့ ဆှီဝတျရညျသောငျး ညီမသုံးယောကျလုံးကို ပြျောရှငျစှာတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။
ညီမအငယျဆုံးလေး ဆှီဝတျရညျသောငျး ကတော့ အဈမနှဈယောကျလိုသရုပျဆောငျခွငျးထကျ သီခငျြးတှသေီဆိုရတာကို ပိုခုနျတတျသူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
ပြျောရှငျနတေဲ့ သူတို့မိသားစုလေးကို ကွညျ့ရငျးပရိသတျကွီးလညျး အပြျောတှကေူးစကျပါစလေို့…….
ဝမျးသာလုံးတှဆေို့နတေဲ့ မမကွီးနှငျ့ ညီမလေး နှဈယောကျ